ResponseTap: Fanaraha-maso antso an-tsaina Smart Match Attribution | Martech Zone
Antsoy ny sehatra Intelligence, ResponseTap, dia namolavola endrika vaovao, Smart Match, izay ahafahan'ny mpampiasa mahita ny sandam-bidin'ny antso an-tsokosoko tsirairay avy ary manome azy io ho an'ny loharanom-barotra, na dia hatramin'ny teny fanalahidy aza.
Ny fahaizanao manara-maso ny loharanom-pahalalana ary avy eo manome fidiram-bola sy sanda margin dia zava-bita lehibe indrindra ho anay. Simon Hoe, Lehiben'ny Digital amin'ny Global Cruise 1st
Ny fitaovana dia mandrisika ny fampiasana angon-drakitra hanatsarana ny fanentanana ho an'ireo mpivarotra ao an-trano sy ireo masoivohon'ny marketing, ary koa ny famelana ireo masoivoho misy mpanjifa afovoany hanao tatitra momba ny ROI marina.
Hatramin'izao, ny mampifandray ny fidiram-bola amin'ny hetsika ara-barotra dia mitaky ny maso ivoho mpampifandray mba hametraka ireo soatoavina manan-danja ao anaty rafitra iray misaraka, na hampiasa fampidirana ao amin'ny rafitr'izy ireo CRM, izay tsy marina sy azo natao foana.
Smart Match no sombin-javatra tsy hita ao amin'ny ankamantatra momba ny mpanao tatitra. Tsy vitan'ny ahafahanao manatsara ny fampielezan-kevitra miorina amin'ny isan'ny antso isaky ny fampielezan-kevitra, fa afaka mampifanaraka ny fomba fiasa arakaraka ny vola miditra na ny tombom-barotra azo. Tsotra ny fampiasana Smart Match hahitana ireo loharano izay mitondra ny varotra telefaonanao avo indrindra. Nick Ashmore, filoha lefitry ny Marketing ao amin'ny ResponseTap
Mampiasa Smart Match izao, ny mpivarotra dia afaka, miaraka amin'ny fampidirana zero, manome ny varotra antso an-tariby amin'ny lafiny marketing rehetra nitranga talohan'ny antso.
Ireo tatitra momba ny antso Attribution dia misy:
Tatitra topimaso momba ny fahazoana - fahitana ny fampielezan-kevitrao sy ny asanao marketing amin'ny toerana iray. Alefaso eo anelanelan'ny fomba fijerin'ny fampielezan-kevitra, Channel na Medium raha mila fahalalana momba ny asa marketing izay manome ny antso, fidiram-bola ary tombony betsaka indrindra.
Tatitra fampitahana Attribution - ampitahao ireo maodely fanamarihana marobe mifototra amin'ny fepetra samihafa. Fantaro ny maha samy hafa ny volan'ny fiantsoana, ny vola azo amin'ny varotra ary ny tombom-barotra amin'ny modely iray hafa.
Mahazoa Demo Smart Match
Tags: fanekena dokam-barotrabing ppcantso fanamelohanafiantsoana fantsonafacebook adsgoogle organikagoogle ppcfiantsoana antso voajanaharyresponsetaplalao mahay
Ahoana no tokony hifandraisan'ny orinasa amin'ny sehatra media sosialy tsirairay